Soosaarayaasha Uruurinta - Warshadaha & Shirkadaha Shiinaha
IPhone 2.5D PMMA shaashadda ilaaliyaha Weligood jabin
Marka loo barbardhigo muraayadda qaboojiyaha, ilaaliyaha shaashadda PMMA waa shey cusub sanadkii hore. Sida filim jilicsan, dabool buuxa oo adag qaarkood. Astaamaha ugu muhiimsan ma jabaan oo way ka buuxaan xabagta.
IPhone 2.5D shaashadda dhoobada dhoobada Waligeed kama jabin
Marka la barbardhigo muraayadda qaboojiyaha ah, shaashadda dhoobada dhoobada laga sameeyay waxay ka kooban tahay qalab gaar ah oo loo yaqaan 'PC + TPU', nooc ka mid ah ilaaliyaha shaashadda jilicsan iyo takhasusyada ugu badan weligood lama jebin doono. Iyadoo la adeegsanayo hawl yar oo ka hortag ah xoqitaan iyo adkeyn gaar ah, ilaaliyaha shaashadda dhoobada ayaa aad iyo aad uga caansan suuqa.
iPhone 12 taxane Schott ilaaliyaha shaashadda muraayadda kulul
Waa maxay Schott Glass Protector?
Kooxda Jarmalka ee SCHOTT waa shirkad caalami ah oo shirkad farsamo sare leh oo la aasaasay sanadkii 1884. 130 sano oo waayo-aragnimo warshadeed ah oo ku dhex jirtay muraayad gaar ah, qalab iyo tiknoolajiyad casri ah. Meelaha ugu waaweyn ee ganacsigana waxaa ka mid ah: qalabka guryaha, dawada, elektarooniga, optics-ka iyo gaadiidka. SCHOTT Waxyaabaha tayada-sare leh, filimka difaaca shaashadda u adkaysi burbura ayaa laga sameeyay muraayadda ugu adag SCHOTT ee warshadaha. Hawsha soo saarista filimka taleefanka gacanta leh, OTAO waxay isticmaashaa geedi socod xoojin laba-gees ah si kor loogu qaado caabbinta saameynta muraayada. Moobaylkaagu wuu adkeysan karaa 25 fuudh Ka badbaadi hoos u dhaca joogga, adoo taleefanka ilaalinaya. Shaqadeeda ilaalinta ka hortagga burburka ayaa garaacaysa inta badan tartamayaasha suuqa waxayna u keentaa macaamiisha khibrad aad u fiican.
IPhone 12 taxane Corning Gorilla ah muraayad ilaaliye shaashad muraayad ah
Waa maxay Corning Gorilla Glass?
Muraayadda Gorilla waa nooc ka mid ah muraayadda kiimikada la xoojiyay ee ay soo saartay oo ay soo saartay shirkadda Corning, oo hadda jiilkeedi toddobaad ah, oo loogu talagalay inay noqoto mid khafiif ah, iftiin iyo u adkaysi u leh waxyeelada. Summad ahaan, Gorilla Glass waa mid u gaar ah Corning,